Maanlinta calanka Romerka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maanlinta calanka Romerka
La daabacay onsdag 4 april 2012 kl 15.46
Maalinta axada - 8 april waa maalinta bulshada Romerks ah. Maalintaan ayaa loo debaaldegayey tan iyo sannadku markuu ahaa 1971- markaas qaranmada midoobey u aqoonsadeen bulshada Romerka bulsha caalamiyah oo laga tiro badan yahay. Isla waagaas ayaa la saaray calanka Romarska oo ah calan ay dhexda uga taalo garaangar gaduudan oo ku socota dhul cagaaran korna blue ka ah. Sidoo kale waxa isla waqtigaas la hirgeliyey heesta calanka romerska oo la yirahdo "gelem gelem", "taas ka micno waan socday".
Tanja Hagert oo ah gudoomiyaha urur u dooda xaquuqda haweenka Romerka "RKRS" ayaa ayadu aaminsan in ay mahiim tahay in loo debaadego maanlinta romerka oo ku aadan maalinta ciida masiixigaan påskiga.
- Maalintaan waxay adkeynaysaa isku kalsoonida, aniga waa ii mahiim in caruurtayda ogyahiin in ay jirto maalinta calanka Romerka, qasatum waa mahiim in sannadkaan oo ah sannadka dhaqanka romerka kor loo qaado arinkaan ayey tiri Tanja Hagert. Waxayna sidoo kale sheegtay in ay ku daashay in la takooro, ayna romerka Sweden ku nool cadibanyahiin. Lakiin ay maalintaan u tahay nuur lagu diirsan karo oo ay dadyowga romerku ku qanacsanaan karaan Romernimadooda.
Bulsha Romerka ayaa ah dad asalkoodo yahay socoto. Sida ay cilmi bareyaashu qabaan dadyowga Romerka ayaa ka soo jeeda India, halkaas oo ay ka soo dhaqaajiyeen bilowgii qarnigii 7-baad. Eurobna waxay soo gaareen garnagii 13-tobnaad. Maantayna Eurob waxaa ku nool 15-20 miljon oo romer ah - waxayna u badan yahiin dalalka kala ha Rumänien iyo Bulgarien.
Sweden waxaa qiyaastii ku nool romer dhan 25 000. Sannadku markuu ahaan 1999 ayaa loo aqoonsadey romerka sweden in yahiin minoritet qaran oo laga badan yahay, sida bulshada jahuuda, samerka finniska sweediskaa iyo weliba bulshada tornedalka. Xataa luuqada romerka ee kala ah romané iyo romani chib ayaa loo aqoonsanyahay in ay yahiin luuqado minoritet qaran ah. In romerka loo aqoonsado in yahiin minoritet qaran ama bulsho laga badan yahay waxay ka micno tahay in sweden uu masuul kasaaranyahay in ay ilaaliyaan dhaqanka iyo luuqada roomerka, saasderteed ayey Radio Sweden u siidaayaa barnaamijyo ku baxa luuqada romani chib.